2 BR Lake Cottage, imizuzu eyi-12 ukuhamba ngezinyawo ukuya edolobheni i-Walker
Walker, Minnesota, i-United States
Siyakwamukela ku-The Hideaway on Lake May!
Indlu yokulala engu-2 ethokomele enokubukwa kwe-panoramic yechibi, ukuhamba ngokushesha ukusuka ezitolo zokudlela nezindawo zokudlela ze-Walker. I-Hideaway inendawo yokuphumula, yokuphumula, nokujabulela ngaphandle kwaseNyakatho ye-Minnesota. Kukhona indawo yokupaka ngaphandle komgwaqo kanye ne-Wi-Fi ukuze usakaze izinhlelo zakho ozithandayo noma usebenze ukude. Uhlelo lwe-Heartland Bike Trail luqhele ngamamayela angu-1/4 kuphela. Ilungele impelasonto yamantombazane, abathanda imidlalo abathule noma isisebenzi esikude esifuna ukubukwa kalula edolobheni.
Silandele @hideawaywalkermn ku-IG naku-FB
I-Hideaway, nakuba iyisikhala esidala nesincane, ihlonyiswe kahle futhi yafakwa ukuze ifake izinto zokwenza ukuvakasha kwakho ngenkathi uku-Walker uphumule futhi ushaja kabusha.
Indawo yomlilo yegesi inikeza indawo ethokomele ngaphakathi ukuze ujabulele ukufunda, ukulala noma ukuvakasha. Lesi sikhala sinosofa wosuku oguqulwa ube umbhede owodwa. Igumbi lokuhlala lifaka indawo yokuhlala eyengeziwe, usofa ogcwele wokulala nokubukwa kwechibi.
Amathuluzi ekhishi ayisisekelo anikezwa ukudla okulula. Umenzi wekhofi & umshini wokugaya, kanye ne-toaster, i-blender & crockpot nakho kuhlinzekwa. Indawo inesiqandisi/isiqandisi, ihhavini/isitofu, ne-microwave.
AMAGUMBI OKUBHELELA KANYE NEBAGE
Amalineni namathawula kunikezwa izivakashi, kodwa sicela uphathe izinto zakho siqu nezinto zangasese ongase uzidinge.
IYADI: Jabulela indawo enkulu ebiyelwe egcekeni enokubukwa kwechibi, ukushona kwelanga okumangalisayo, izihlahla ezivuthiwe kanye nezitshalo ezihlala njalo ezimibalabala. Ngenkathi yeqhwa, letha isihlibhi sezingane, igquma elifushane kodwa elisheshayo! Izindawo zokuhlala: kumpheme ongaphambili, umpheme ongemuva kanye negceke, izihlahla zama-hammocks (BYO)
I-FIREPIT: ngakho konke okudingayo ukuze wakhe umlilo kalula nezinti zokuwosa kunoma iyiphi isizini! Izimpahla ze-BYO s'mores
I-LAKESHORE/DOCK: Ukuhamba ngokushesha nje phansi ezitebhisini zendawo kanye nezinyathelo ezimbalwa zowela umgwaqo othulile, jabulela isiphuzo sakho osithandayo esikhumulweni semikhumbi esibanzi ngenkathi ubuka. Zicwilise echibini noma thatha ama-kayak ethu asebenziseka kalula ukuze uthole i-paddle ethule. Ebusika, letha izinto zakho zokudoba eqhweni, izikebhe eqhweni, ama-skis, noma izicathulo zeqhwa ukuze uzijabulise echibini elithulile.
IZINTO EZEngeziwe NEMINININGWANE EYEngeziwe
Izinkuni zokubasa zamahhala kanye nempahla yokuqalisa
I-Bug Spray kanye nekhithi yosizo lokuqala
Imidlalo, amakhadi & puzzle
Abalandeli egumbini ngalinye
Igalaji liyatholakala ukugcina ibhayisikili namagiya ngesaziso esithuthukisiwe
4.98(59 okushiwo abanye)
I-Walker iyidolobhana elimatasatasa e-Leech Lake. Idonsa abaningi ngokuthenga kwayo, izindawo zokudlela, kanye nemisebenzi eminingi yangaphandle. Sinomuzwa omuhle obekwe phezulu lapha enyakatho, lapho sethemba ukuthi uzoyizwa i-Minnesota Nice. Kusukela e-The Hideaway, izihambeli zingaphakathi kwebanga lokuhamba ukuya ezintweni eziningi esizithandayo njengabantu bendawo: Ibha yewayini iPortage Brewery & Wine Down, i-Walker Farmer's Market, i-Von Hanson's Meats, i-Piggy BBQ nezitolo ezincane zasendaweni njenge-Peculiar Painter & The Art & Antique I-Mall of Walker, amasistimu emizila egandayiwe, nezindawo ezimbalwa ukuze ujabulele i-Leech Lake enhle. Isitolo segrosa sendawo kanye neGreen Scene Organic Market cishe zihamba imizuzu emi-5-10 uma ungathanda ukuzilungiselela ukudla kwakho.
Uma ungathanda ukuthatha uhambo losuku, sincoma ukuthi uvakashele i-Itasca State Park ukuze ubone isizinda se-Mississippi (35 miles). Noma ukukhetha okuseduze, ukugibela intaba, isihlibhi noma ukushushuluza ezweni eliseShingobee Recreation Area (5 miles)
Siyakwamukela ku-Walker! Sihlala imizuzu embalwa nje ukusuka lapho. Uma sitholakala, siyajabula ukusiza ngalokho ongase ukudinge ngesikhathi uhlala futhi sikunikeze izincomo.
Hlola ezinye izinketho ezise- Walker namaphethelo